उपत्यकाका जीर्ण आकाशेपुलको मर्मत भएन
धीरजकुमार देवकोटा मंगलवार, भाद्र २७, २०७४
३१ मार्च २०१६ मा भारतको कोलकातास्थित बुराबजारमा निर्माणाधीन एक आकाशेपुल भत्कि“दा २१ जनाको ज्यान गयो । सिमेन्ट र फलामको सामान प्रयोग गरिएको पुलको भग्नावशेष झर्दा ७० जना घाइते भए । सरकारी उदासीनता, ठेकेदारको लापरवाही र भ्रष्टाचारका कारण आकाशेपुल भत्केको भन्दै चर्को विरोध भयो । नेपालको राजधानीमै पनि कतिपय आकाशेपुल जीर्ण अवस्थामा छन् । जसले कोलकाताको त्यो भयानक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने डर पैदा गर्छ । सामान्यतया यात्रुहरूको सहजतालाई ध्यानमा राखी शहरको ट्राफिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न आकाशेपुल निर्माण गरिएको हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष फाइदा पैदल यात्रुलाई नै हुन्छ । तर, राजधानीका आकाशेपुल कत्तिको यात्रुमैत्री र प्रयोगका हिसाबले सुरक्षित छन् त ? यो गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।
रत्नपार्कबाट भोटाहिटी जान दिनहु“ हजारौं यात्रु आकाशेपुल भएर ओहोरदोहोर गर्छन् । त्यही पुलमाथि रोजीरोटीको लागि भन्दै पसल थाप्नेको जमात उस्तै हुन्छ । ठूल्ठूला होर्डिङबोर्डले ढाकिएका आकाशेपुलमाथि या आसपासमा अपांगता भएका व्यक्ति स्थायी पालेझैं दिनहुँ पुलको रक्षार्थ खटिरहेका हुन्छन् । आकाशेपुलका यस्ता दृश्यले पुलको प्रयोग कसरी भइरहेको छ प्रस्ट देख्न सकिन्छ । प्रायः पुराना शैलीमा बनेका ती पुल जीर्ण छन् । वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबीचको पुलको अवस्था त झनै नाजुक छ । भित्ताभरि लेउ लागेको छ । सा“घुरो पुलको छेवैमा भएको फोहोरको डंगुरले पाइला टेक्नै घिन लाग्छ । नाकमुख छोपेर यात्रु पुलबाट बाटो काटिरहेका भेटिन्छन् । यो पुलका अधिकांश खुड्किला भत्किसकेका छन् । पुलमाथि हि“ड्ने ठाउ“ पनि ढलान नभई थोत्रो टिनको प्रयोग गरिएको छ । यसले जुनसुकै बेला भत्किने खतरा छ ।
१६ वर्षदेखि पुलमुनि माला र लकेटको पसल सञ्चालन गर्दै आएका रवि पकुवाल भन्छन्, ‘यस्तो डरमर्दो तरिकाले बस्नुपरेको छ । कुन वेला पुल भत्किन्छ थाहा छैन, डरैडरमा बस्नुपरेको छ ।’ नाजुक बन्दै गएको पुल भत्किँदा नसोचेको क्षति हुने उनको चिन्ता छ । भन्छन्, ‘मेलम्चीको पाइप बिछ्याउने वेला खनिएका कारण पुलको जग हल्लिएको हो । अब त सानो भूकम्पले पनि यसलाई भत्काउन सक्छ ।’उत्तरपट्टि सय मिटर पर भोटाहिटीमा रहेको आकाशेपुलको हालत पनि उस्तै छ । सा“घुरो पुलमाथि खुद्रे व्यापारीको राज छ । माग्न बसेका व्यक्तिले पुलको आधा भाग ओगटेका हुन्छन् । पुलको संरचना पनि अन्यसरह जीर्ण नै छ । पुलमाथि हि“ड्दै गरेकी विमला तामाङ भन्छिन्, ‘सरकारले हाम्रै सुरक्षाका लागि आकाशेपुल प्रयोग गर भन्छ । तर, पुल भने यस्तो छ । माथि हि“डे पनि असुरक्षा र फोहोर छ । अनि कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ  !’ पुलमाथि हुने व्यापारले यात्रुलाई सास्ती छ ।
पैदल यात्रुको समस्या र राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थित बनाउन महानगरपालिकाले पटक–पटक पुल निर्माणबारे योजना बनाउने आश्वासन दिँदै आएको छ । तर, उसले निश्चित अविधिसम्म बनाइसक्ने भनेका कुनै पनि पुल निर्माण गर्न सकेको छैन । गत वर्ष महानगरपालिकाले नया“ बानेश्वर, चाबहिल, जिल्ला अदालतअगाडि र इन्द्रायणी छेउको लखः तीर्थमा स्टिल संरचनाको पुल निर्माण गर्ने घोषणा ग¥यो । बजेट पनि विनियोजन ग¥यो । तर, एक प्रतिशत पनि काम भएन । राजधानीका आकाशेपुलको मर्मतसम्भार र विस्तारबारे महानगरका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्मा नै अनभिज्ञ छन् । भन्छन्, ‘म भर्खरै आएको छु । यस विषयमा अध्ययन गर्न पाएको छैन । तर, अब चाडैं पुलको काम थाल्दैछौँ ।’
राजधानीकै कतिपय आकाशेपुल जीर्ण भएर जुनसुकै वेला भत्किने खतरा छ। तर, सरकारी निकाय भने एकअर्कामा दोषारोपणमा व्यस्त देखिन्छन्।
आकाशेपुलको मर्मत र निर्माणमा अख्तियारवाला सरकारी निकाय एक अर्कालाई जिम्मेवार ठान्छन् । कार्यकारी अधिकृत शर्मा पुलसम्बन्धी मुख्य जिम्मेवारी उपत्यका विकास प्राधिकरणको भएको भनेर पन्छिन्छन् । शहरी विकास भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्मा उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक विस्तार आयोजनालाई जिम्मेवार ठान्छन् । ‘पुलको समस्या विकराल बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘जाइकाबाट राजधानीका कतिपय ठाउँमा आकाशेपुल बनाउने भनिएको छ । अब समस्यामा छिट्टै सुधार आउनेछ । जीर्ण आकाशेपुल चाँडै मर्मत हुनेछन् ।’ राजधानीका सबै ठाउँमा आकाशेपुल बनाउन सम्भव पनि छैन । कतिपय ठाउँमा निजी भवन र बाटो अभावले बाधा पुर्‍याएको छ । विभागका महानिर्देशक शर्मा आकाशेपुलभन्दा पनि ‘अन्डरपास’ को विकल्प सुझाउँछन् । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो अन्डरपास कलंकीमा बन्दैछ । यसकै सिको कोटेश्वर र बानेश्वरजस्ता अत्यधिक भीडभाड हुने स्थानमा बनाउनुपर्ने शर्माको जोड छ ।
थप पुल कहिले ?
राजधानीको धेरै भीडभाड हुने महाराजगन्ज, कालीमाटी, थापाथली, गौशाला र त्रिपुरेश्वरमा पनि आकाशेपुल आवश्यक भइसकेको छ । पुतलीसडक, माइतीघर, बबरमहल, कालीमाटी, टेकु, भोटेबहाल, केशरमहल, सोह्रखुट्टे, बौद्ध तथा सातदोबाटोमा आकाशे पुलको खाँचो छ । आकाशेपुल नहु“दा पैदलयात्रु तथा सवारीचालक दुवैलाई गाह्रो भइसकेको छ । ती ठाउँमा क्रमशः पुल निर्माण गर्दै जाने महानगरको योजना छ । तर, हालसम्म निर्माणसम्बन्धी कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । भएका पुल व्यवस्थित गर्न नसक्ने महानगरले नया“ पुल थप्ने योजना हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ । भोटाहिटीको आकाशेपुलमा भेटिएकी अर्की यात्रु रञ्जना श्रेष्ठको सुझाव छ, ‘अब नयाँ पुल बनाउनुभन्दा सम्भावित खतराबाट जोगाउन जीर्ण पुल मर्मत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’